बिहिवार, आश्विन १६, २०७६ ओम बानियाँ
Photo : dhakatribune.com
बालबालिका अबोध हुन्छन् । निश्चल हुन्छन् । छलकपटरहित सफा मनका हुन्छन् । खिलखिलाएको कोमल पूmल जस्ता हुन्छन् । तर आदिम कालदेखि नै बालबालिकाको अबोधपनको फाइदा उठाउँदै समाजमा उनीहरूमाथि अनेक प्रकारका शोषणहरु हुने गरेको छ । बालबालिकाको शोषण अहिले नेपाली समाज तथा गाउँघरमा पनि बग्रेल्ती देखापर्न थालेको छ । त्यसो त पहिला यस्ता घटनाहरु नहुने होइनन्, हुन्थे ।
तर यस्ता घटनाहरु छोपिन्थे, दबाइन्थे र बाहिर प्रकाशमा त्यति धेरै आउँदैन्थे । पहिला पहिला नैतिक मूल्यमान्यतामाथि बढी नै जोड दिइने हुनाले त्यस्ता घटना निकै कम हुन्थे । हिजोआज भने आधनुकिकरणसँगै नैतिक मूल्य, मान्यता र आदर्शमा ठूलो ह्रास आएको छ । त्यसैले सडक बालबालिका होऊन् या घरपरिवारमा बस्ने बालबालिका होऊन्, असुरक्षित छन्, उनीहरु शोषणमा पर्ने, पीडित हुने घटनामा निकै वृद्धि भएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ ।
बालबालिकालाई धम्क्याउने, त्रसाउने, डराउन दिने तथा खिसीटिउरी गर्ने, बेइज्जती गर्ने तथा ब्लैकमेल गर्ने जस्ता कार्यहरु बाल मानसिक शोषण अन्तर्गत पर्दछन् । यस किसिमको शोषणले बालबालिकाको मनमा चोट पर्ने र मानसिक समस्याहरु जन्माउने संभावना हुन्छ । नेपाली समाजमा कलिला बालबालिकाहरुले यस किसिमको शोषण घर भित्र, घर बाहिर, स्कूलमा समेत भोगेको देखिन्छ ।
बालबालिकाहरु स्वाभावैले चञ्चल हुन्छन् । उनीहरुको चञ्चलतालाई ठूला भनिएका अभिभावकले रुचाउँदैनन् । अनि शान्तिसँग बस्ने उपदेश दिन्छन् । त्यति गर्दा पनि मानेनन् भन्ने ठाने भने अभिभावकले पिट्ने, कोठामा थुनिदिने, खाना नदिने, हातखुट्टा बाँधेर राखिदिने आदि जस्ता अपराधिक कार्यहरु गर्न पनि पछि पदैनन् ।
यस्तो गर्नु भनेको बालबालिकाको नजरबाट आफू गिर्नु त हुदै हो, भविष्यमा घरमै एउटा विद्रोही पाल्नु पनि हो । अज्ञनताका कारण खासगरी हाम्रो गाउँघरमा यस किसिमको शोषण भइरहेको देखिन्छ । बाँध्ने, निर्घात कुटपिट गर्ने तथा आगोले पोलिदिने लगायतका कार्यहरु शारीरिक शोषण भित्र पर्दछन् भने बालबालिकाको शरिरमा नीलडाम देखिनु, कोतारेको दागी भेटिनु, हातखुट्टा भाँचिनु शारीरिक शोषणका उदाहरणहरु हुन् ।
सामान्यतः यौन शोषण भन्नेबित्तिकै बालिकाहरुमाथि हुने शोषण बुझिन्छ तर बालकहरु पनि यौनिक रुपमा उत्तिकै शोषित हुन्छन्, हुने गरेका छन् । युनिसेफले गरेको एउटा अनुसन्धानअनुसार हाम्रो समाजमा बालिकामाथि हुने यौन शोषण भने निकै डरलाग्दो छ । घरपरिवारकै र आफन्तले नै यस्तो काम गरिरहेका हुन्छन् ।
बच्चाहरुलाई लोभ्याएर, कुनै सामानको लाभ देखाएर, त्रसाएर, धम्क्याएर बच्चाको गोप्य अंगमा छुने आदि विभिन्न घृणित कार्यहरु गरी शोषण गरिरहेका हुन्छन् । बालबालिकालाई अश्लिल चलचित्र, फोटो वा विज्ञापनमा प्रयोग गराउने जस्ता क्रियाकलापहरू पनि बाल यौनशोषण अन्तर्गत नै पर्दछन् ।
यस्ता क्रियाकलापहरू बालबालिकालाई झुक्याउ“दै अनेक प्रलोभन देखाएर अथवा दवावमा पारेर गरिन्छ । कतिपयले भने बालबालिकालाई उनीहरूको विश्वास जितेर नजिकको अभिभावकको रुपमा प्रस्तुत गरेर पनि यौनजन्य क्रियाकलाप गर्ने गरेका छन् । बालबालिकाले नबुझ्ने गरी बालबालिकाको इच्छाविपरीत तथा उनीहरुलाई बेफाइदा हुने कार्य सबै शोषण कार्य हुन् ।
बाल यौन शोषणमा यौन मात्र नभएर रक्सि, लागुपदार्थ जस्ता पदार्थहरुको पनि धेरै दूरुपयोग हुने गर्छ । बाल यौन शोषण हालैमा बढ्दै गइरहेको समस्या हो । १३ देखि १५ बर्षसम्मका नवयुवाहरु सबभन्दा असुरक्षित भएको मानिन्छ तर यो भन्दा साना उमेरका नानीहरु पनि खतरामा भएको भेट्टाइएको छ ।
बाल वेश्यावृत्ति र व्यावसायिक बाल यौनशोषण एक अर्कासँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । बालबालिकामाथि गरिने व्यावसायिक यौनशोषणलाई बाल वेश्यावृत्ति भनिन्छ । बालबालिकालाई उनीहरूको मञ्जुरी लिई वा नलिई गरिने यौनजन्य कार्य गराउनु नै बाल यौनशोषण हो । बालबालिकालाई बाल वेश्यावृत्तिमा लगाउनु जघन्य अपराध हो र यो अपराध मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको अपराधभित्र पर्छ ।
बाल वेश्यावृत्तिमा परेका बालबालिका यौन संक्रमणमा विभिन्न रोगबाट ग्रस्त हुनुका साथै उनीहरूको जीवनसमेत बर्बाद हुने स्थिति सृजना हुन सक्छ । तसर्थ कानुनले यसको कडा सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यस्ता अपराधिक कार्यमा लगाउने पीडकले पीडितलाई कानुनी पहुँचभन्दा टाढा राखेका हुन्छन् ।
विशेषगरी मानव बेचविखन ओसारपसारका तरिकाको मध्यमबाट बालबालिकालाई झुक्याई ललाईफकाई प्रलोभनमा पारेर डरत्रास देखाउ“दै आफ्नो परिवारबाट अलग राखी यौनजन्य कार्यमा संलग्न गराइन्छ ।
कुनै पनि उद्देश्यले बालबालिका बेच्न वा किन्ने, बालबालिकाका अंग झिक्ने, कुनै पनि फाइदा लिएर वा नलिएर उनीहरुलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने जस्ता क्रियाकलापहरू गराउने जस्ता कार्यहरू बालबालिका बेचबिखन अन्तर्गत गर्दछ ।
बालबालिकामाथि यौनशोषण तथा श्रमशोषणको माध्यमबाट आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि पनि बालबालिका बेचविखन तथा ओसारपसारका कार्यहरू हुने गरेका छन् । बालबालिकाको स्वतन्त्रताको हनन् गर्दै उनीहरूमाथि हुने यौनशोषण, श्रमशोषणका साथै अन्य दासपूर्ण व्यवहारहरू बालबालिका बेचविखन र ओसारपसार अपराधको एउटा स्वरुप हो ।
सुरुसुरुमा देह व्यापारमा संलग्न गराउनका लागि महिला तथा बालिकाको मात्र बेचबिखन हुने गरेको थियो भने अहिले आएर व्यक्तिको श्रमशोषण गर्ने, मानव अंगको व्यापार गर्ने, बालबालिका र महिलालाई व्यवसायिक रुपमा नै प्रयोग गरेर यौनशोषण गराई फाइदा लिने गरिन्छ ।
यस्ता कार्य अविभावकको स्वीकृति लिएर वा नलिएर दुवै तरिकाले गरिन्छ । बालबालिकाको यौन शोषणको कार्य स्वभाविक रुपमा मानव मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको अपराध हो र १६ वर्षमुनिका बालिकालाई उसको सहमतिमा नै यौनसम्पर्क गरेमा पनि नेपालको कानुनले त्यसलाई बलात्कारको अपराध मान्दछ ।
आदिमकालदेखि नै बालबालिकामाथि हुने गरेको अर्को शोषण हो बालश्रम शोषण । बालश्रम बालबालिकाले गर्ने शारीरिक श्रमसँग सम्बन्धित छ । बालश्रमिकको रुपमा काम गर्ने बालबालिका समग्रमा अशिक्षित, असजग र गरिब परिवारका पाइन्छन् । बालश्रमले बालबालिकालाई उनीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन अपरिहार्य शिक्षाबाट वञ्चित गराउँदछ ।
किनकी बालश्रमको कारणले बालबालिकाले शिक्षाबाट हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, तालिम र सीप गुमाउँदछ । बाल ऐन २०४८ ले १६ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ र उनीहरूलाई बालश्रमिकको रूपमा काम गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यद्यपि १४ देखि १६ वर्षका बालबालिकाले प्रतिदिन निश्चित ६ घण्टा मात्र काम गर्न पाउँदछन् । उनीहरूले लगातार ३ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्न पाउनु पर्दछ ।
कुनै पनि रोजगारयुक्त कार्य जसले बालबालिकाको बाल्यकालमा दखल दिन सक्छ, स्कुल जानबाट रोक्छ वा मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रुपमा असर गर्नेलाई नै बालश्रम भनिन्छ । संसारभरि नै बालश्रम कानुन विपरित मानिएको छ ।
कानूनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउनु गैरकानुनी घोषणा गरेको छ तथापि श्रमको कुनै पनि क्षेत्र बालश्रम र शोषणबाट मुक्त हुन सकेको छैन । बालबालिकालाई काममा लगाउनुको मूल कारण नै श्रम सम्बन्धी ऐन कानुनको अपर्याप्तता र अप्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।
आजका बालबालिका भोलिका कर्मठ नागरिक हुन् । बालबालिका परिवारका मात्र होइन, समाज र राष्ट्रका पनि मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले मेरुदण्डलाई हुर्काउँदा परिवारले, समाजले तथा राष्ट्रले धेरै कुराको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जबसम्म समाज शिक्षित हुँदैन, तबसम्म यसप्रकारका शोषणहरु भइनैरहन्छ ।
जान्ने बुझ्ने ठूला व्यक्तिले त आफूमाथि भएको शोषणलाई प्रतिवाद गर्न सक्छन्, विरुद्धमा बोल्न सक्छन् तर बालबालिकाले त आफूमाथि शोषण भइरहेको समेत चाल पाउँदैनन् । आफूलाई अप्ठेरो परेको कुरा अरुलाई गुनासो पनि गर्न सक्तैनन् । गुनासो गरे पनि पत्याइदिने व्यक्ति कोही हु“दैनन् । त्यसैले बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकहरुसँग केही भन्न खोजेमो तिनका कुराहरु ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ ।
उनीहरुलाई यस प्रकारको शोषण भयो भने कसरी त्यसबाट उम्कने तथा मुख खोल्ने आदिको शिक्षा पनि दिनुपर्छ । सकेसम्म बालबालिकाहरुलाई एक्लै छाड्नु हुँदैन । बालबालिकाले यो मान्छेसँग बोल्दिन, म एक्लै घरमा बस्दिनँ भनेर प्रतिक्रिया जनाएमा यसको संकेत बुझ्नुपर्छ । स्कुलमा वा स्कुल बसमा वा घरमा एक्लै काम गर्नेस“ग बस्न नखोजेमा अभिभावकले जबरजस्ती गर्नु पनि हुँदैन ।
धेरै बालिका यस्तै बेला शोषित भएका छन् । मामा, काका वा हेल्पर जो भए पनि यदि बालबालिकाहरुले मन नपराएको संकेत पाइयो भने अभिभावक सतर्क हुनुपर्छ । उनीहरुको मनोभाव बुझ्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्था के कारणले हुन्छ भनी बुझ्नुपर्छ । कतै त्यहाँ बालबालिकामाथि जबरजस्ती त गरिएको छैन ? कतै उनीहरु बलात्कृत त भएका छैनन् ? शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावकले त्यस्ता आशय नबुझ्दा समाजमा शोषण र बलात्कारका धेरै घटना भएको देखिएको छ ।
त्यसैले बढीभन्दा बढी समय आफ्ना सन्तानलाई दिने, उनीहरुका कुरा सुन्ने गर्दा अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानले विश्वास गर्छन् । उनीहरुले नयाँ कुरा सुनाउँछन्, पीडाका कुरा सुनाउँछन् । यसबाट धेरैजसो समस्या समाधान हुनसक्छ । प्रमुख कुरो यस किसिमका यौन क्रियाकलाप र शोषणहरुबाट बालबालिकालाई बचाउन सरकारले कडा कानुन बनाउन र शोषणका बारेमा सजग गराउन जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।
बक्समा राख्ने ।
बाल शोषण र यौन पर्यटक
इन्ड चाइल्ड प्रोस्टिट्युसन इन एशियन टुरिजमले २०१६ मा गरेको ग्लोबल स्टडी अन सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन अफ चिल्ड्रेन इन ट्राभल एण्ड टुरिजम शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा विगतमा पश्चिमा देशका र धनीहरूबाट मात्र बाल यौनशोषण हुने गरेकोमा अहिले बालबालिका जुनसुकै देशका जोसुकै अपराधीको निशानामा परेको उल्लेख छ । धार्मिक पर्यटक समेत यस्तो घृणित अपराधमा संलग्न हुने गरेको प्रतिवेदन बताउछ ।
उक्त अध्ययनले नेपाल, कम्बोडिया, हाइटी, होण्डुरस, केन्यालगायतका बालबालिका अमेरिकी र क्यानेडियन पीडकको निशानामा पर्ने खतरा औंल्याएको छ । नेपालमा एकदशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले धरासायी बनाएको पर्यटन व्यवसायलाई उकास्ने नाममा गरिएको जायजरनाजायज प्रवद्र्धनले पनि यस्तो आपराधिक मनोवृत्तिलाई हौस्याएको यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
यौन पर्यटकलाई खुशी पार्न केही व्यवसायीले बालबालिका प्रयोग गरेको हुनसक्ने कतिपय बताउँछन् । चर्चित बेलायती म्यागजिन द इकोनोमिस्टले २००८, जनवरीमा माओवादी द्वन्द्वका कारण नेपालमा यौन व्यवसायीको संख्या बढेको र यौन पर्यटक आकर्षित भएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । दक्षिण एशियाका सेक्स ट्रेडविद् जोन फ्रेडरिकलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले यौन पर्यटनमा नेपाल थाइल्याण्डकै अवस्थामा पुगिसकेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, आश्विन १६, २०७६, ०५:२३:५६
बुटवलको ६० वर्षे यात्रा : बटौलीदेखि बुटवलसम्म
यस्तो बन्दैछ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल
फागुन ३ गते स्थापना दिवस मनाउँदै प्रदेश ५ सरकार, ३५ जनालाई बाँडिनेछ पदक
बुटवलमा बन्दैछ काठमाडौंभन्दा ठूलो सम्मेलन केन्द्र
बस्तीलाई असर नगरी यसरी बन्नेछ लुम्बिनी विश्व शान्ति शहर
शनिवार, माघ २५, २०७६ प्रदीप आचार्य
‘लुम्बिनी विश्व शान्ति शहर’को गुरुयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले चासो देखाएको छ। यससँगै रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लामा रहेका बौद्ध सम्पदाहरुको संरक्षण गर्दै स्थानीय जनतालाई पर्यटनसँग जोड्न बृहत्तर लुम्बिनी विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत सरकार सक्रिय बनेको हो। पुरा पढ्नुहोस्
बिहिवार, माघ २३, २०७६ प्रदीप आचार्य
लुम्बिनीका स्थानीयले क्वाकको शान्ति शहरलाई अस्वीकार गर्ने नै हो भने यसलाई उत्तरतिर सारेर विकास गर्न सकिन्छ। अत्यन्तै उच्च कोटीको यो आयोजनालाई सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन र गैंडहवा गाउँपालिकाहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन्। क्वाकले बनाएको खाकामा अहिलेको लुम्बिनीलाई धर्म जोन मानेर केन्द्रमा राखिएको छ। अब त्यसो नगरेर लुम्बिनीलाई शान्ति शहरको अन्तिम विन्दु मान्न सकिन्छ। लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकहरु उत्तरतिरको शान्ति शहरमा केही दिन विताएर अन्त्यमा पवित्र लुम्बिनी पुगेर फर्किन सक्छन्। पुरा पढ्नुहोस्